Iray amin’ireo toerana manintona olona hanaovana vakansy amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao ny any Foulpointe na Mahavelona. Na dia mbola azo lazaina fa vao miandoha ihany aza ny fialan-tsasatra dia efa betsaka ireo olona nisafidy ity faritra iray ity noho izy manana ranomasina tsy manonja ka azo hilalaovana tsara. Mananararaotra ireo mpanao vakansy ry zareo tompon-tany ka manao izay fomba rehetra ahazoana vola. Tsy zoviana amin’ireo efa mpandeha any Foupointe ny fisian’ireo tovovavy sy vehivavy mpandrandrana, ao ihany koa ireo mivarotra ireny firavaka vita amin’ny akora natoraly ireny. Efa mahazatra ihany koa ny mahita ireo tovolahy mpikarakara sakafo eny amoron-dranomasina. Ny Camaron sy ny trondro ary ny akoho, ahandroina amin’ny fomba samy hafa no tena fanaon’izy ireo amin’izany. Eo ihany koa ireo mpitondra amin’ny lakana izay efa mampalaza an’I Foulpointe hatramin’ny ela.
Samy afaka milalao ranomasina tsara na ny kely na ny lehibe
Matsiro ery ny camaron sy ny akoho ka samy nazoto homana ny mpianakavy
Fa anisan’ny zavatra vao haingana ihany kanefa dia efa miroborobo tokoa, izay hita eny amoron-dranomasina eny fisian’ireo vehivavy mpanotra na manao masazy. Afaka manotra ny vatana iray manotontolo izy ireny na ny ampahany ihany arakaraka ny faritra tiana asiana otra. Tsy dia lafo loatra ny sarany ho an’ny teratany Malagasy kanefa dia tena manala havizanana tokoa ary mampavitribitrika avy eo. Iray tamin’ireny tovovavy mpanotra ireny izay sendran’ny tenanay teny amoron-dranomasin’I Foulpointe ireny I Siza Pascaline, tovovavy tsotra, sariaka, mahay manaja olona. Indro ary ny resadresaka fohy nifanaovanay taminy.
Izy no Pascaline mpanotra ao Foulpointe
Vohizo : Ianao dia iray amin’ireo tovovavy maro izay manotra ety amoron-dranomasina ety. Nianarana ve sa dia ataotao foana izany fanorana ataonao izany ?
Pascaline : Nanaraka fiofanana ho mpanotra nandritra ny efa-bolana ny tenako. Io fiofanana io dia nomen’ireo tompon’andraikitra avy amin’ny Ministeran’ny Fahasalamana ka izay vehivavy liana tamin’izany teto an-toerana dia afaka nanaraka izany fiofanana izany avokoa. Manana taratasy manamarina izany fiofanana nataoko izany ny tenako.
Vohizo : Olona toy inona no tena miotra aminao ary firy isan’andro eo ho eo izany ?
Pascaline : Rehefa amin’ny fotoam-pialan-tsasatra toy izao dia manararaotra daholo izahay satria maro ny olona, mety hahazo hatrany amin’ny folo isan’andro raha mety ny tsena. Na teratany Malagasy na vahiny dia ataonay avokoa. Ireo vahiny matetika dia atao any amin’ny hotely hipetrahany, afaka manao ny rehetra any an-trano ihany koa izahay. Samy hafa ny sarany ho an’ny Malagasy sy ny vahiny, natao mora ny antsika Malagasy. Marihiko fa ny menaka vita amin’ny Ylang-Ylang no hanoranay amin’izany, izay menaka tena tsara tokoa ho an’ny fahasalamana.
Vohizo : Ankoatra ny fanorana dia inona koa ny fitadiavam-bola ataonao eto ?
Pascaline : Mahay mandrandrana ihany koa ny tenako. Manana rahavavy iray izay aho izay antsoina hoe Marie ka izahay roa dia samy manotra no mandrandrana. Na Malagasy na vahiny dia samy randraninay avokoa. Maro karazana ny randrana azo atao ary efa manana sary azo isafidianana izahay . Vitanay mitovy tsy misy valaka amin’izay sary nosafidiana ny volon’ny olona. Ny anay mirahavavy dia zaraina mitovy hatrany ny vola azo isan’andro, mba samy mitondra vola mody rehefa hariva ny andro.
Io i Marie eo am-pandrandranana.
Vohizo : Ny teninao farany.
Pascaline : Efa miezaka hampiroborobo hatrany ity fanorana ity izahay eto Foulpointe amin’izao fotoana. Atsy ho atsy dia hitondra blouzy fotsy sy satroka kely fotsy avokoa ireo mpanotra matihanina eto amoron-dranomasina mba hanavahana ny tena mpanotra. Ny hafatro farany ho an’izay olona rehetra mahita ny lahatsoratra soratanao dia izao : “Aza adinoina i Pascaline raha sendra mandalo eto Foulpointe ianareo ka mila otra fa eto foana izahay miandry anareo e !.”
Misaotra betsaka an’i Pascaline nanaiky nitafatafa taminay sy nalaina sary teny amoron-dranomasin’i Foulpointe. Teo ihany koa i Marie rahavaviny nanaiky nalaina sary teo am-pandrandranana.
Sary : Nanouh & Mirana